स्वस्थ मासु कसरी चिन्ने ? फ्रिजमा राखे कतिदिनसम्म खान मिल्छ ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
स्वस्थ मासु कसरी चिन्ने ? फ्रिजमा राखे कतिदिनसम्म खान मिल्छ ?
२७ आश्विन २०७८, बुधबार ११ : ३८ बिहान
स्वस्थ मासु कसरी चिन्ने :
–मासुमा अम्लियपनाको मात्रा ५।७ पीएचभन्दा कम र ६।३ पीएचभन्दा बढी हुनुहुँदैन ।